विचित्र संसार Matribhumi
९ असोज, २०७८ काठमाडौँ : संसारभर अहिले पनि फरक–फरक परम्परा अवलम्बन गर्ने जनजातिहरू भेटिइन्छन् । जनजातिहरूको आफ्नै नियम र परम्परा हुन्छन् । केही जनजातिकाहरु आश्चर्य लाग्दा रीतिथिति मान्ने गर्छन् । […]
७ असोज, २०७८ काठमाडौँ : तीन वर्षको एक अमेरिकी कुकुरले गिनिज बुकमा नाम लेखाएको छ । लु नामको उक्त पोथी कुकुरले संसारकै सबैभन्दा लामो कान भएको कुकुरको रुपमा विश्व कीर्तिमान […]
२ असोज, २०७८ काठमाडौँ : उपहार त कसैलाई खुशी बनाउनको लागि दिइन्छ । तर एक प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई उपहार दिँदा परिवारमा खल्लिबल्ली मच्चिएको छ । उपहारले युवतीको जिन्दगी नै परिवर्तन […]
२ असोज, २०७८ काठमाडौँ : एक महिलाले फास्ट फूड रेस्टुरेन्टमा चिकेन बर्गर अर्डर गरिन् । महिलाले बर्गरको पहिलो गाँसमै जे भेटिन्, त्यो देखेपछि उनको हालत खराब भयो । न्यूयोर्क पोस्टको […]
२९ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : अन्य कुरामा उत्कृष्ट तर बाहिरी आवरणमा ‘कुरूप’ श्रीमानमार्फत् जन्मिने सन्तान भयानक हुने डरले घानाकी एक महिलाले आफ्ना ‘निकै सुन्दर’ पूर्वप्रेमीमार्फत् तीन सन्तान जन्माएकी छिन् । […]
२८ भाद्र, २०७८ एजेन्सी : सिकागोका एक नवविवाहित जोडी सोसल मिडियामा एकाएक चर्चामा आएका छन् । उनीहरु चर्चामा आउनुको कारण भने निकै रोचक छ । यी जोडीले आफ्नो विवाहमा सरिक […]
२७ भाद्र, २०७८ एजेन्सी : आफ्नै प्रेमी पाइलटले विमानमा घरेको घोषणा सुनेर उडानमा रहेकी एक युवती लाजले भुतुक्कै भएको भिडियो अहिले चर्चित छ । इन्टरनेटमा भाइरल यो भिडियोलाई अहिलेसम्म एक […]
एजेन्सी, २६ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : कल्पना गर्नुहोस्, उनी कति बाध्यकारी बाबु हुन्, जसले आफ्नी छोरीलाई बेच्दैछन् । परिवार भोको परेपछि बाबुले छोरीलाई बेच्न लागेका हुन् । यो अफगानिस्तानमा भएको […]
२६ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : प्ल्याङ्कलाई सबैभन्दा मुस्किल कसरत (व्यायाम) मध्ये एक मानिन्छ । साधारणतया मानिसहरू दुईदेखि तीन मिनेटपछि यो व्यायाम गर्न सक्दैनन् तर एक व्यक्तिले लगातार साढे ९ घण्टासम्म […]
२२ भाद्र,२०७८ काठमाडौँ : कसैको मायामा परेपछि आफुले माया गरेको व्यक्ति अरु कसैको भएको देख्न सक्दैन् । तर, भारतको छत्तिसगढको बस्तरमा एक अनौठो घटना भएको छ । जुन दृश्यले मायाको […]
आफ्नै अपान वायु (पाद) बेचेर लखपति बनिन् यी महिला
२१ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : संसारमा मानिसहरु अनेक खालका कामहरु गरेर पैसा कमाउँदछन् । तर के कोही मानिसले आफ्नो अपान वायु (पाद) बेचेर पनि पैसा कमाउन सक्दछ ? यो त […]
कैदी बिनाको देश, सबै जेल खाली
२० भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : नेदरल्याण्ड विश्वको सबैभन्दा सून्दर देशहरुमा गनिन्छ । तर अहिले नेदरल्याण्ड सून्दरताका अलावा क्राइम रेटका कारण चर्चामा आएको छ । नेदरल्याण्डमा अपराध दरमा यति धेरै गिरावट […]
१० हप्तामा कोरोनाका तीनथरी खोपका पाँच डोज लगाएपछि।।।
१६ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप धेरैले पाइरहेका छैनन् । खोपको उपलब्धता भएका देशमा पनि कोही खोप लगाउन अनिच्छुक समेत छन् । तर ब्राजिलका एक व्यक्तिले भने १० […]
१५ भाद्र २०७८ एजेन्सी : चोरी, डकैती जस्ता अपराधिक मुद्दामा प्रहरीले मानिसहरुलाई जेलमा थुनेको त सुनैकै कुरा हो तर, आज हामीले प्रहरीको हिरासतमा रहेको कुखुराको भालेको बारेमा चर्चा गर्न लागिरहेका […]
सुतेका थिए उनि‘तर उठ्दा विश्वभर भाइरल (तस्विरसहित)
१० भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : निदाईरहेका श्रीमानलाई महिलाले मोडलका रुपमा प्रस्तुत गरेको तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । युवक निदाइरहेका देखिन्छन् उनले महिलाको पहिरन लगाएका छन् । तस्बिरमा […]
९ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : घरमा आसपास बोटबिरुवा लगाउनाले हरियाली त हुन्छ नै साथसाथै परिवारको स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । तर, हामिले रोप्ने फूल, बिरुवाहरु सही दिशामा रोपिएन भने […]
८ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : बेलायतमा मानसिक रुपमा बिरामी व्यक्तिको एउटा जटिल घटना सार्वजनिक भएको छ । यी व्यक्तिले आत्महत्या गर्नका लागि आफ्नो यौनाङ्गमाथि हमला गरेर अलग्याएका थिए । यद्यपि, […]
३१ साउन, २०७८ काठमाडौँ : संसारमा अलग–अलग खाले रीतिरिवाज र परम्परा हुन्छन् । चीनको एउटा परम्पराले पनि तपाईलाई चकित पार्नसक्छ । यहाँ विवाहपछि बेहुलाका साथीहरुले बेहुलीलाई आफ्नो काँधमा राखेर उठाउँछन् […]
३० साउन, २०७८ काठमाडौँ : गिनिज बुकमा नाम लेखाउने मौका एउटा सुँगुरले पनि प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा लामो उमेरसम्म बाँचेर एउटा सुँगुरले गिनिज बुकमा नाम लेखाएको हो । संसारमा […]
२५ साउन, २०७८ एजेन्सी : जन्मिँदा विश्वकै सानो भनिएकी एक शिशु १३ महिना सिंगापुरको एक अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्किएकी छन् । क्वेक यू सुवान जन्मिदा मात्र २१२ ग्राम, करिब एउटा […]
२० वर्षको कुखुरा भाले मर्दा गाउँले नै गए मलामी
२२ साउन, २०७८ काठमाडौँ : दाङको तुलसीपुरमा कुखुराको भाले मरेपछि त्यसका मालिकले कपाल मुण्डन गर्नुका साथै नुनसमेत छोडेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१५ पहरुवा गाउँका ४६ वर्षीय शिव सुवेदीले पालेको भाले मरेपछि […]
२० साउन, २०७८ एजेन्सी : कोही मानिसलाई पनि धेरै मोटो हुन मन पर्दैन् तर विभिन्न कारणले मोटाउन पुग्छन् । मोटापन आफैमा एक गम्भिर रोग हो । शरीरमा अत्यधिक बोसो जमेको […]
२० साउन, २०७८ काठमाडौँ : सर्वसाधारणको चलनचल्तीमा छाडा (अश्लील ?) शब्दोच्चारण र गालीगलौजका शब्द निकै बढेको पाइएको छ । बालबालिकाले हेर्ने टेलिभिजन तथा सिने सामग्रीमा गालीगलौजका शब्द त्यति नदेखिए पनि […]
विश्वकै ठूलो मुख भएको महिला
१८ साउन, २०७८ एजेन्सी : अमेरिकाको कनेक्टिकटकी समान्था राम्सडेलको मुख विश्वकै ठूलो भएको गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डले जनाएको छ । उनको मुख ६.५६ सेन्टिमिटरसम्म खुल्ने र तेस्रो नाप्दा १० […]
अच्चमको देश: जहाँ मुसा पाल्न सरकारको अनुमति चाहिन्छ, मार्न र बेच्न प्रतिबन्ध छ
१६ साउन, २०७८ काठमाडौँ : क्यानडा विश्वको उच्च विकसित देशमा पर्छ । उत्तर अमेरिकास्थित यो देश क्षेत्रफलका हिसाबले रुसपछि विश्वको दोस्रो ठूलो देश हो । अमेरिकासँग यो देशको आठ हजार […]
१३ साउन, २०७८ काठमाडौँ : थाइल्याण्डमा १ सयभन्दा बढी बाँदरका दुई गुटबीच लडाइँको एक भिडियो बाहिर आएको छ । भिडियोमा बाँदरहरूको ठूलो झुण्ड सडकमा एकआपसमा लडिरहेको देख्न सकिन्छ । यसबीच […]
२ साउन, २०७८ काठमाडौँ : पिरामिड जस्तो देखिने संसारकै विचित्रको काउलीमाथि वैज्ञानिकले अनुसन्धान गरेका छन् । यो काउलीको आकार यस्तो देखिनुमा थुप्रै कारण भएको वैज्ञानिकले बताएका छन् । स्थानीय भाषामा […]
एजेन्सी : आज सम्म मानिससँग जोडीएका अपराध, प्रहरी तथा अदालतको बारेमा सुनेकै छौ । तर, एउटा कुखुराको भालेलाई आफ्नो मालिकको ज्यान लिएको अभियोगमा पक्राउ गर्ने भएको छ । वास्तवमा कुखुराले […]
एजेन्सी : चीनको तिब्बत भौगोलिक दृष्टिले निकै जटिल छ । अग्ला हिमाल, नदीनाला र खोल्साहरु छन् । तर, त्यस्तो जटिल भूगोलमा चीनले बुलेट ट्रेन गुडाएर विश्वलाई चकित पारेको छ । […]
काठमाडौँ : हामीले सानैबाट फिल्म, टेलिभिजन सुन्दै वा पछिल्ला केही दशकयता आफैले टेलिफोन उठाउने बित्तिकै प्रयोग गर्दै आएको शब्द हो, ‘हेल्लो’ । तर तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ, फोनमा सबैभन्दा […]
एजेन्सी : यी हुन् जिओना । यीनको ३९ पत्नी र २ सय जति सन्तान दरसन्तान छन् । जिओनाको ७६ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ । मधुमेहका विरामी उनको सोही […]
काठमाडौँ : कोरोना विरुद्धको खोपको असरका बारेमा कयौं जिज्ञासाहरु आइरहेका छन् । केही व्यक्तिहरु खोप लगाएपछि ज्वरो आउनुका साथै शरीर दुखेको लगायतका सामान्य असर देखिएको बताइरहेका छन् भने केहीले खोप […]
काठमाडौँ : कोरोना संक्रमित व्यक्तिको पहिचान कुकुरबाट समेत गर्न सकिने भएको छ । बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिचान कुकुरले पनि गर्नसक्ने पुष्टि भएको हो । अध्ययनमा संलग्न […]
एजेन्सी : सन् २००७ मा अष्ट्रेलियामा भेटिएको डायनासोरको एक प्रजातिको अवशेषको अध्ययन गरेपछि अनुसन्धानकर्ताले यसलाई महाद्वीको हालसम्मको सबैभन्दा डायनासोर बताएको छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार संसारमा हालसम्म १५ सबैभन्दा ठूला डायनासोरबारे […]
काठमाडौं : सेक्सका लागि सबैभन्दा उत्तम समय कुन हुन सक्छ रु धेरैजसो जोडीको मनमा यो सवाल उठिरहेको हुन्छ । जोडीको इच्छा र उपयुक्त वातावरण मिलेमा सेक्सका लागि कुनै समय कुरिरहनु […]